Sicily dia mikarakara famerenana indray ny fizahantany aorian'ny COVID | Vaovao momba ny dia any Italia
Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Sisily dia mikarakara famerenana indray ny fizahantany aorian'ny COVID
Febroary 5, 2021
by Mario Masciullo - eTN Italia
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Sisily dia mikarakara famerenana indray ny fizahantany aorian'ny COVID
Raha mbola mitohy ny vaksinin'ny COVID-19 eran'izao tontolo izao, dia manatanteraka ny drafitra i Sisily hamerina ny faritra amin'ny fahasalamana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fizahan-tany.
Ny renivohitra italianina amin'ny kolontsaina 2022 dia hifantoka amin'ny lova sy ny kolontsaina famolavolana.
Mampiorina fotodrafitrasa ho an'ireo nosy i Sisily hamaly ny fangatahana fizahan-tany antenaina.
Eo am-pamolavolana ny asa amin'ny sary an-tsehatra amin'ny maritrano ara-nofo Sisilianina manan-tantara.
Miaraka amina drafitra voafaritra tsara, i Sisily, iray amin'ireo faritra mizaka tena italianina dimy, dia mikasa ny hamoahana indray ny fampiroboroboana ny fizahan-tany aorian'ny COVID mba hamerenana ireo fatiantoka ara-toekarena lehibe nijaly tamin'ny taona 2019 sy 2020 indrindra amin'ity sehatra ity.
Ny toerana sasany mihoatra ny sasany dia eo amin'ny fetrany ara-toekarena, toy ny faritanin'i Ragusa, faritra iray izay nitombo be tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'i Trapani.
Ny hevitra handaminana ny fifanarahana eo amin'ireo tanàn-dehibe finaliste ho an'ny renivohitry ny kolontsaina italy 2022 dia miainga avy any Trapani mba tsy handany ny lova namorona manan-karena noforonina ary ny tambajotra fiaraha-miasa lehibe nohazavaina nanomboka tamin'ny mpandresy, ny Procida Island.
Nanao sonia ny fifanarahana fisakaizana teo amin'ireo tanàna 10 misy ifandraisany amin'i Procida, izy ireo. Ny kolontsaina dia afaka manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny aorian'ny areti-mandringana ary làlana tena ilaina hanohanana ny sehatry ny fizahan-tany ara-kolontsaina sy ny orinasa.
Ny fandraisana andraikitra vaovao amin'ny drafitra fampandrosoana
Ny kely kokoa nosin'i Sisila hampiana bus, minibus, ary fitaovana hafa amin'ny fanavaozana ny teknolojia hamporisihana ny fizahantany maharitra.
Manokana, ao amin'ny Kaominin'i Malfa (Nosy Salina) ny bisy dia hampiasaina amin'ny "Green Line" ho avy, lalana iray izay ahitana nosy tontolo iainana miaraka amin'ny fivezivezena tsy misy vokany.
Nelle Madonie (ny Madonie dia iray amin'ireo tandavan-tendrombohitra lehibe ao amin'ny nosy Sisily any amin'ny faritra avaratry ny nosy) ny tetikasa "Forest Bathing Center" dia natomboka izay manana tanjona kendrena amin'ny fahasalamana sy ny fahasalamana mety ho an'ny Madonie Park.
Eto dia azo atao ny manao ny fanitrihana ala izay manatsara sy mampiseho ny sandan'ny fitsaboana amin'ny zava-maniry avo lenta amin'ny zotra manokana sy ny fametrahana azy. Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, mety ho vahaolana mandresy io.
Nanomboka ihany koa ny asa amin'ny fandaminana ny tranon'i Luigi Pirandello izay dramatista italianina, mpanoratra tantara, poeta, ary mpanoratra tantara fohy izay ny fandraisany anjara lehibe indrindra dia ny lalaoviny. Nomena ny loka Nobel tamin'ny 1934 izy. Ny trano dia miorina ao amin'ny contrada Caos any Agrigento, iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Sisila, ary tafiditra ao amin'ny Lohasahan'ny Temples Archaeological Park any Agrigento, iray amin'ireo ohatra miavaka indrindra amin'ny kanto sy ny maritrano Greater Greece. Ny trano dia fananganana ambanivohitra amin'ny faramparan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ary hamboarina amin'ny fanesorana ireo sakana arafitrano ary hamorona sehatra kolontsaina avant-garde.
Famatsiam-bola vaovao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ivon-toerana manan-tantara ao Palermo
Ny sasany amin'ireo fanelanelanana nokasaina dia anisany: Ny Monasiteran'ny Masera Karmelita Voalanjalanja ao Kalsa, iray amin'ireo tanàna kanto indrindra ao Palermo ary ny kompania Spasimo, fiangonana katolika mbola tsy vita ao amin'ny manodidina an'i Kalsa. Ny tantara mahaliana dia tamin'ny andron'ny amperora Tiorka Soliman the II.
Ny Collegio della Sapienza alla Magione, ny fanazavana ny tsangambaton'ny UNESCO sy ny lalan'ny mpandeha an-tongotra, ny Riso Museum Museo (tranombakoka kanton'ny faritra ankehitriny) ary ny fanavaozana ny "Gancia" - fiangonana manan-tantara izay nanomboka tamin'ny 1490 ny fananganana azy - dia simenitra avokoa fandraisana andraikitra amin'ny doka sy varotra natolotra an'i Mibact (Ministeran'ny lova ara-kolontsaina sy hetsika ary fizahan-tany) amin'ny famolavolana tetikasa nasionaly tokana.
Ny State Mint dia nanapa-kevitra ny hanokana an'i Sisila amin'ny iray amin'ireo farantsakely 15 amin'ny fanangonana numismatika 2021 izay mamerina ny kanelina sikiliana, paska sikilianina mahazatra ary ny passito, divay mamy mahazatra, ary koa ny Temple of Concord of the Valley an'ny Tempoly, tandindon'ny fahatsarana rehetra an'ny Sisilianina an'arivony taonan'ny fomban-drazana.
Ny areti-mandringana dia nametraka olana teo amin'ny sehatry ny sakafo sy ny divay ary ny fizahan-tany, saingy antenaina fa afaka miverina ho protagonista ao afovoan'i Mediterane i Sisily.